China Mineral Fiber Ceiling BH003 fekitori uye Vagadziri | Beihua
Munzvimbo yakavhurika yehofisi, mabhodhi emvere dzemachira anokwanisa kuderedza ruzha runokonzerwa nemafambisirwo ezvinhu, zvishandiso zvehofisi, uye zviitiko zvevashandi, kuderedza kudzokorodza ruzha rwemukati, uye kuita kuti vashandi vatarise zvirinani, kuvandudza kushanda kwebasa, uye kuderedza kupera kwebasa. Munzvimbo yakavharwa yehofisi, iyo mineral wool board inotora nekuvhara kupararira kwemasaisai emhepo mumhepo, zvichinyatsoita musindo wekuisa izwi, kuverengera kuvanzika kwemukamuri kurira, uye kuderedza kupindirana kwakapindirana kwemakamuri apedyo.
Mukamuri remukamuri kana makamuri emusangano, izwi remutauri rinoda kunzwiwa zvakajeka nevateereri mune chero chinzvimbo kuti vave nechokwadi chekuti anonzwisiswa nenzira kwayo. Naizvozvo, izvo zvekuvakisa zvinoda kusarudzwa kuti zvinyatsojeka kujeka kwemukati inzwi.
Iyo yakasununguka uye porous yemukati dhizaini yemaminerari bhodhi bhodhi ine yakanakisa basa yekushandura inzwi redhiyo simba. Iyo mineral furawa bhodhi inoshandisa yakakwirira-mhando refu marefu seyakaomeswa zvinhu zvekugadzira. Ruzha rwemhepo runoita kuti iyo fiber iite mutsindo kwenguva yakareba, iyo inogona kushandura yakawedzera inzwi simba simba munetic simba. Panguva imwecheteyo, iyo yakadzika yakadzika maburi mukati me mineral fur board board inobvumira mamwe mafungu einzwi kuti apinde uye akawedzere nguva yavo yekufamba. Pasi pechiitiko chekupokana, iro ruzha simba rinoshandurwa kuita simba rekupisa.
Mirayiridzo yekuisirwa kwemaminera ebhudhi bhodhi
Kutanga, sarudza siling gridhi dzakasiyana zvichienderana nemitoro kana zvinodikanwa zvakasiyana.
Chechipiri, mineral wool panels inofanira kuiswa uye kushandiswa munzvimbo iyo tembiricha yekushisa iri pasi pe80%.
Yetatu, kuiswa kwemapurasitiki emvere dzemuchadenga kunofanirwa kupedzeredzwa mukati mebasa remukati memvura, mapaipi akasiyana-siyana mudenga akaiswa, uye mapaipi emvura anofanirwa kuedzwa isati yavakwa.
Chechina, kana uchiisa mapani emvere dzemuchina, magurovhosi akachena anofanira kupfekedzwa kudzivirira mapanuru kuti asasviba.
Chechishanu, kamuri mushure mekuisirwa pani yemaminerari emvere dzinofanira kufambiswa nemhepo, uye magonhi nemahwindo zvinofanirwa kuvharwa nenguva kuitira kunaya.
Yechitanhatu, mukati memaawa makumi mashanu mushure mekuvakwa kwebhokisi remapuranga akaumbwa, panofanirwa kunge pasina kana yakasimba vibrate isati yanyatso gapwa.
Yechinomwe, kana uchiisa munzvimbo imwechete, ndapota shandisa iyo batch yakafanana yezvigadzirwa.
Chechisere, mineral wool board haigoni kutakura chero zvinhu zvinorema.
Yepfuura: Mineral Fiber Ceiling BD001
Inotevera: Mineral Fiber Ceiling BC004